Neerja (2016) မြန်ုမာစာတန်းထိုး - Channel Myanmar Update
Neerja (2016) မြန်ုမာစာတန်းထိုး
၀မ်းနည်းဖို့ရော၊ အသည်းထိတ်ဖို့ ရော ရသစုံခံစားရမယ့် အိန္ဒိယ သည်းထိတ်ရင်ဖို အတ္ထုပ္ပတ္တိဒရာ မာ ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၈၆ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့မှာ Pan Am 73 လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲ ခံရတဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ် တည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီ ဇာတ်ကားမှာ အဓိကဇာတ် ကောင်က အသက် (၂၃) နှစ်အ ရွယ် လေယာဉ်မယ်လေး နီရာဂျာ ဘာနော့ဖြစ်ပြီး ပြန်ပေးသမားတွေ ရဲ့ လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးသည် ၃၆၁ ယောက်နဲ့ လေ ယာဉ်ဝန်ထမ်း ၁၉ ယောက် အ သက်အန္တရာယ်မရှိရလေအောင် ကာကွယ်ခဲ့တာကို ကြည့်ရှုရမှာ ပါ။
ပျော်စရာမိသားစုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လေယာဉ်မယ် လေး နီရာဂျာဟာ Pan Am 73 လေယာဉ်ကြီးမှာ လေယာဉ်အရာ ရှိ (ပါဆာ)အဖြစ် ပထမဆုံးတာ ၀န်ထမ်းဆောင်ရမှာပါ။ သူတာ ၀န်ထမ်းမယ့် လေယာဉ်ကြီးဟာ အကြမ်းဖက်သမားလေးယောက် ကို တင်ဆောင်လာမိတဲ့အတွက် ကြမ္မာဆိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတော့ တယ်။
လေယာဉ်ပြန်ပေးသမား တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နီရာ ဂျာဟာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေ ပေမယ့်လည်း ခရီးသည်တွေ အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက် ကြိုး စားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေကို ကြည့်ရတဲ့ အခါ အခက်ခဲဆုံးအနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နီရာဂျာရဲ့ဖြစ် အင်ကို ကိုယ်ချင်းစာမိကြဦးမှာ ပါ။
နီရာဂျာဟာ သူများတွေကို အန္တရာယ်ကင်းအောင်ကာကွယ် ပေးခဲ့ပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူတော့ မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လေယာဉ် ပေါ်က ခရီးသည်ကလေးငယ် သုံးယောက်ကို ကယ်တင်ရင်းအ ကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ သေနတ် နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါ တယ်။
လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားလေးကို ဘယ်လို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထား သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး နော်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ နီရာဂျာဘာ နော့အဖြစ် ဆိုနမ်ကာပူးရ်က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား ပြီး ဇာတ်ရုပ်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပရိ သတ်တွေကတော့ မှတ်ချက်ပြု ထားကြပါတယ်။
credit to : Gold Channel
Review Credit to-7day Daily
Encoded by: Mg Moe Tain
Download and Watch Here
Labels: Action, Bollywood
Sex Hunter (1980) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်ကားလေးရဲ့အစကတော့ ငယ်ရွယ်ပြီးချောမောလှပတဲ့ ဘဲလေးအကမယ်လေး မီကီိ တစ်ယောက် ကပွဲအပြီးမှာ သင်တန်းဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ရခဲ့...
Memories of Murder (2003) - မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb (8.1/10)….Rotten Tomatoes (89%) Rating တွေကြည့်ပြီး ကိုရီးယားဇာတ်ကားမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ အတွေးမများပါနဲ့။ ကိုရီးယားဇာတ်ကားအစစ်ဖြစ်...
Empire of lust 2015 - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီရာဇ၀င်ကားလေးဟာ ၁၄ ရာစုကကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်မိသားစုတစ်ခုရဲ့အကြောင်းရာကိုရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်… ကင်မင်ဂျေဆိုတဲ့စစ်သူကြီးဟာ...
The Dreamer (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး 21+
ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါအပြောင်းအလဲလေဖြစ်အောင်18+ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် 18+ဆိုပေမဲ့IMDbမှာ7.2ထိရထားတာကြောင့် ဇာ...
NightWings (2015) MIni Series - မြန်မာစာတန်းထိုး
ကျွန်တော်တို့တွေ Batman အကြောင်း အများကြီး သိခဲ့ရပြီးပြီ သူ့အကြောင်းကိုလည်း အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေ အများကြီး ထွက်ခဲ့ရပြီး...
[18+] Naughty Instint (2008) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဂျပန် Porn မင်းသမီး Akiho Yoshizawa ပါဝင်တဲ့ ဂျပန် 18+ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့…..အောက်မှာ သူများရေးထားတဲ့ Eng လိုသာဖတ်သွားကြပါ...
Vertical Limit (2000) - မြန်မာစာတန်းထိုး
User Review အနေနဲ့ “ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ အလန်းစားစွန့်စားခန်းများ” vote အများကြီးရထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ သင်ဟာစွန့်စားခ...
Julia’s Eyes (2010) - မြန်မာစာတန်းထိုး
မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်က သူသေဖို့လမ်းစကိုသူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုရင်ယုံရခက်ရမလားပါပဲ… အဲဒီလိုစဉ်းစားရအောင်လည်းဒီကားမှာ မျက်...